ဒီနေ့ကနောင်မင်းသားလုပ်ကြံခံရပုံဆောင်းပါးလေး ပြန်ဖတ်ရင်း ရင်ထဲမှာ နှမြောစိတ် နဲ့အတူ အားမလိုအားမရဖြစ်မိတာလေး ပြောချင်ပါတယ်။
ကနောင်မင်းသားကြီးဆိုတာ အများသိကြတဲ့အတိုင်း ကုန်းဘောင်ခေတ် မှာရှာမှာရှားတဲ့ထက်မြက် ထူးချွန် ပြီး ခေတ်မီတဲ့ ကိုယ်တော်ကြီးပါ….ရဲရဲတောက် သတ္တိသွေးနဲ့အင်္ဂလိပ်ကို မကြောက်မရွံ့ စိန်ခေါ်ဝံ့ သူပါ။
ရေသတ္တ၀ါတွေသေကြေပျက်စီးမှာစိုးတဲ့မြန်မာတွေရဲ့ ရှေးရိုးစွဲနေတဲ့ စိတ်ကြောင့်သာ ဆက်မလုပ်ဖြစ်ပေ မယ့် ရေမြုပ်ဗုံးတွေတောင်တီထွင် ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက် စိတ်ရော ကိုယ်ပါနှစ်ပြီး အလုပ်လုပ် တဲ့ ဒီလိုခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက် ရဲ့အသက်တစ်ချောင်း က ကြွေလွင့် ချင်တော့လည်း လွယ်လိုက်တာ….
လွှတ်တော်အစည်းအဝေးလုပ်နေတဲ့ကနောင်မင်းသားကြီးကို တူတော်မောင်မြင်ကွန်း ကဓါးနဲ့ဦးခေါင်းတော်ကိုပြတ်အောင် ခုတ်လိုက်တာ ဖတ်ရတော့ကျမရင်ထဲ ဟာခနဲဖြစိမိပါတယ်။
နှမြောတသခြင်းနဲ့အတူ ဒီလောက်တန်ဖိုးကြီးလှတဲ့ကိုယ့်အသက်ကို ဘာလို့ ဒီလို အလွယ်တကူပေး လိုက်ရတာ လဲလို့ ဂရုဏာဒေါသောဖြစ်မိပါတယ်။
ဘုန်းတန်ခိုးရှိတဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေ ဆိုတာ နမိတ်တော် ပေါ်စမြဲပါ..
လုပ်ကြံခံရမယ့် မနက်မှာ အိမ်တော်မှ အထွက် ဆင်တော်သို့တက်တဲ့ အချိန် မှာဗောင်းတော်ကျွတ်ကျသွား လို့ကြင်ယာတော် လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင်က ကောက်ပေးတဲ့ အခါ အရိပ်ထဲမှာ အိမ်ရှေ့ကိုယ်တော်၏ ဦးခေါင်း ရိပ်ကိုမမြင်ရပါဘူး..တဲ့ 
ဒါဟာ ကြီးစွာသောနမိတ် ပါလားလို့စိုးထိတ်သွားမိတဲ့ လှိုင်ထ်ိပ်ထားကနမိတ်မကောင်းလို့ မောင်တော် လွှတ်တော်မတက်ပါနဲ့ လို့လျှောက်ထားပါတယ်။ဒါပေမယ့် လူတိုင်းကို ကိုယ့်စိတ်လို ထင်နေတဲ့ ရိုးဖြောင့် တဲ့ကနောင်မင်းသားက “ ငါ့ကို ရန်ပြုနိုင်သူ မမွေးသေး” ဆိုပြီး စိုးရိမ်ကြီးနေတဲ့ လှိုင်ထိပ်ထားကိုတောင် ရယ်မော ပြောဆိုသွားပါတယ်။
အဲ့ ဒီအချိန်က မင်းတုန်းမင်းက ကိန်းခန်းအရ မြို့အပြင်တွင် ထွက်ပြီး လွှတ်တော်စည်းဝေး ကျင်းပနေချိန်ဖြစ် ပါတယ်။ကိုယ်တော်ကြီး က စိတ်အေးလက်အေးနဲ့ယာယီလွှတ်တော်တဲမှာတိုင်းရေးပြည်ရေးဆွေးနွေးနေ တုန်းမှာပဲ မြင်းကွန်းညီနောင်ဟာ ရန်ဖြစ်သလို ဓားချင်းခုတ်ပြီး လွှတ်တော်ဝန်း အတွင်း ပြေးဝင်လာပါတယ်။
သူရဲဝန်ဦးရွှေလုံးက မူမမှန်ကြတာ ရိပ်စားမိလို့” ရန်သူတော်ဖြစ်ပါသည် ဘုရား ရှောင်တော်မူပါ”လို့သတိပေးချိန်ဟာ နှောင်းသွားပါပြီ။မြင်ကွန်းမင်းသားက ကနောင်ကိုယ်တော်ကို လိုက်လံခုတ်တဲ့ အခါ ကိုယ်တော်မရှောင်နိုင် ခဲ့ ဘဲ ခေါင်းပြတ်သွားတာပါ။
ဒီလိုကနောင် မင်းသားကြီးဆုံးပါးသွားရတဲ့ အတွက် ကျမတို့ မြန်မာပြည် အနာဂါတ်ကြီး လည်းပြောင်းလဲသွား ရတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကနောင်မင်းသားကြီးသာလုပ်ကြံမခံရဘဲ နန်းတက်လာနိုင်ရင် တိုင်းပြည် အတွက် အသက်စွန့် ပြီး ထူးထူး ချွန်ချွန်ဆောင်ရွက်မှာပါ။ ဆင်ဖြူမရှင်မိဖုရားကြီးတို့ ကင်းဝန်မင်းတို့ ကိုလည်း နိုင်နင်းအောင် ဖိနှိပ်နိုင်လို့သတ္တိရှိပြီး ထူးချွန်တဲ့ မင်းညီမင်းသားတွေ တပြုံတမကြီးလည်း ဆင်နင်းပြီး အသတ်ခံရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်နက်ခဲယမ်းတွေတီထွင်ပြီးနယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ်ကို တောင် ပြန်ပြေးအောင်တော်လှန် နိုင်ပြီး မြန်မာပြည် ကြီး ကျွန်ဘ၀ရောက်ချင် မှ ရောက်ပါလိမ့်မယ်….
တန်ဖိုးရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်တစ်ချောင်းရှင်သန်ခြင်း က များစွာသော အသက်တွေကို ကယ်တင်နိုင် တဲ့အတွက်အသက်ကိုဥာဏ်စောင့်ဆိုသလို စောင့်ရှောက်သင့် လှပါတယ်။
တကယ်လို့ သာ ကနောင်မင်းသားကြီးသာ အိမ်တော်က မထွက်ခင်ပေါ်လာတဲ့နမိတ်ကို သေချာ သတိထားဆင်ခြင်မယ်ဆိုရင် .....
တကယ်လို့ သာလွှတ်တော်ကိုမသွားဘဲအခြေအနေ စောင့်ကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်.......
ဒီလုပ်ကြံမှုကြီးဟာ အောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး..လို့တွေးမိတိုင်းမချင့်မရဲစိတ်နဲ့ဝမ်းနည်းတသ နှမြောလှပါတယ်။
ဒါက ကုန်းဘောင်ခေတ် က ဆုံးရှုံးမှုကြီးပါ။
နောက်နှစ်တစ်ရာကျော် ကြာ တဲ့ အချိန် …၁၉၄၇ (လွတ်လပ်ရေးရဖို့ တစ်နှစ် အလို) မှာလည်း ကျမတို့မြန်မာတမျိုးသားလုံးရဲ့ဖခင်ကြီး ၊အင်္ဂလိပ်အင်ပါယာ ကိုကိုင်လှုပ်ပြီး ဂျပန်ကို ကြောက်ရွ့ံ ထွက်ပြေးအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လည်း လုပ်ကြံခံရပါတယ်။
လက်နက်ကိုင်လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကြပ်ကြပ်မပ်မပ်မချထားတဲ့ အစည်းအဝေးခန်းမထဲ ကို သေနတ်တွေ ကိုင်ပြီးဝင်လာတဲ့ သူတွေကို ကြောင်ကြည့်နေရပြီး ကိုယ့်ရင်ဘတ်ကို ပစ်တဲ့ သေနတ်ကျည်ဆံ ကို လက်လေးနဲ့ ကာရင်း ဗိုလ်ချုပ်ကျဆုံးသွားရတာ ခု တွေးမိရင် ကျမ ခု မျက်ရည်ဝဲလာပါတယ်။
ခက်ခက်ခဲခဲ နဲ့ ရဲဘော်၃ကျိပ် ဖွဲ့၊ ဂျပန်မှာ မသေတရုံနေပြီး စစ်ပညာသင်လာပြီး တိုက်ပွဲတွေ အလီလီ ဆင်နွှဲ ၊ ဂျပန် လက်ချက် ၊ အင်္ဂလိပ်ဗုံးဒဏ်တွေ ကို ကြံ့ ကြံ့ ခံလာခဲ့တဲ့ကျမတို့ ဗိုလ်ချုပ် ရဲ့ တန်ဖိုးရှိလှ တဲ့ အသက်တစ်ချောင်း ကလည်း ကြွေလွင့် ရတာ လွယ်ကူလိုက်တာ…
ဗိုလ်ချုပ်သေဆုံးသွားရတာာ မြန်မာပြည်ရဲ့ အနာဂါတ် သေဆုံးသွားရတာပဲဆိုတာ ခုကျမတို့ ရဲ့မျိုးဆက်တွေရင်းပြီး သိလာခဲ့ရပါပြီ။
ရင်နာနာနဲ့ကျမ စိတ်ထဲကနေ ဗိုလ်ချုပ်ကို အကြိမ်ကြိမ် မေးမိပါတယ်။
ဘာလို့ကိုယ်ရံတော်တပ်ဖွဲ့ တွေ ၊ အစောင့်အကြပ်တွေ နဲ့ ကိုယ့်အသက်ကို မကာကွယ်ခဲ့တာလဲဗိုလ်ချုပ်ရယ် …
အားလုံးကို ကိုယ့်လိုထင်ရလား ….ရိုးလှတဲ့ ဖခင်ရယ်…
တတိုင်းပြည်လုံးငိုမဆုံး အပူလုံးကြွပြီး ငိုကြွေးနေပေမယ့်ဗိုလ်ချုပ်အသက် ကို ပြန်မရတော့ပါဘူး။
တကယ်လို့ သာ …..၁၉၄၇ခုနှစ်မှာဗိုလ်ချုပ်မကျဆုံးခဲ့ ရင်
တကယ်လို့ သာ … ၁၉၄၈ က လွတ်လပ်ရေး ရပြီး ဗိုလ်ချုပ်သာ မြန်မာပြည်ကို အုပ်ချုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်
လက်ရှိကျမတို့ မြန်မာပြည်ဟာဒီ့ထက်အဆပေါင်းများစွာတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးပြီး သိက္ခာရှိနေမယ်ထင်ပါတယ်။
ပြောချင်တာကတန်ဖိုးရှိလှတဲ့ အသက်တစ်ချောင်းက သေချာသတိထား စောင့်ရှောက်ထိုက်တယ်မဟုတ်ပါလားရှင်….
ကိုယ့်အသက်သေဆုံးတာ ကိုယ်ပဲ ထိခိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး ။ ကိုယ် နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ သက်ဆိုင်သူတွေ လည်း ထိခိုက်ပါတယ်။ကျမတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း အရွယ်မတိုင်ခင် ဆုံးပါးသွားတဲ့ စောင့်ရှောက် သူတွေကြောင့်ဘ၀အခြေအနေ ပြောင်းသွားတဲ့ကလေးတွေ ကို တွေ့ မြင်နေရပါတယ်…
ကျမ ဆိုအရင်ကသိပ်ပေတာပါ။ နေမကောင်း တာတောင်ဆေးသောက် ချင်မှသောက်တာ..ဒါပေမယ့် ခုနားလည်လာပါပြီ။
ကျမက အဖေ နဲ့ နှစ်ယောက်တည်းနေရတာပါ။အဖေ့အတွက်အကုန် ကျမကတာဝန်ယူနေရတာမို့့ ကျမကျန်းမာကြံ့ ခိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သာ ကျမ သေဆုံးသွားမယ်ဆိုရင် ကျမ အဖေ လည်း အိုကြီးအိုမ နဲ့ ဒုက္ခရောက်မှာပဲလို့ ..စဉ်းစားရင်း ကျမ အသက် ကို ကျမစောင့်ရှောက်နေ ပါတယ်။
ဒီလိုပဲ အိမ်ထောင်သည်တွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ့်ကို မှီခိုနေတဲ့သားသမီးလေးတွေ အနာဂါတ်က ကိုယ့်လက်ထဲမှာ ရှိလို့ သတိထားကြပါ။
တိုင်းပြည်ရဲ့ အဖူးအညွန့် လေးတွေဖြစ်လို့ နိုင်ငံတော်အတွက်၊လောကကြီးအတွက်ဘာမှမလုပ်ပေးရသေးခင် မသေဆုံးအောင်ကိုယ့်အသက်ကိုယ်စောင့်ရှောက် ကြပါ။
ကနောင်မင်းသားလို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို မမြင့်မြတ်ပေမယ့် ကျမတို့ အနေနဲ့လည်းမိသားစု နဲ့လောကကောင်းကျိုးကို တတ်နိုင်သလောက်သယ်ပိုးဖို့အတွက်အချိန်မတန်ခင်ကိုယ့်အသက်တစ်ချောင်း မဆုံးရှုံးရအောင်စောင့်ရှောက် ကြပါလို့သတိပေးချင်ပါတယ်။